Uninzi lwabantu baseMelika baceba ukuhamba ekhaya ngexesha leholide
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Uninzi lwabantu baseMelika baceba ukuhamba ekhaya ngexesha leholide
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Xanduva • Tourism • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iziphumo zoPhando lweeHolide / 2021 zoVavanyo lweeMvakalelo ezivavanye abahambi abayi-1,138 baseMelika phakathi kuka-Okthobha 26 noNovemba 5, 2020 kwizicwangciso zabo zokuhamba kunye nezinto abazikhethayo, bakhululwa namhlanje.
Ngokweziphumo, iipesenti ezingama-74 zabahambi baseMelika ababonakalise ukuba bazokuhamba ngo-2020 baceba ukuhamba ngexesha leeholide elizayo.
Umndilili wokuzimisela komntu ukuhamba uyakhula kwaye ngelixa kusekho ukungaqiniseki okunxulumene nesifo, ngokokuPhononongwa kweeNdwendwe ngeeholide / 2021, uninzi lwabantu baseMelika baceba ukuhamba ekhaya ngexesha leholide.
Bonke abathengi abachongiweyo bachaza ukuba baceba ukuhamba kwiinyanga ezili-18 ezizayo.
I-73.6% yabahambi abathi bazokuhamba kulo nyaka babonise ukuba bacwangcisa ukuthatha uhambo ngexesha leholide elizayo.
I-85.1% yabathathi-nxaxheba abathi bathatha uhambo ngo-2020 babonisa ukuba bazakube besiya kuziyolisa kwintsalela yonyaka, ngexa i-24.6% ibonakalise ukuba baya kukhenketha.
I-78.5% yabahambi ibonakalise ukuba bacwangcisa ukuhamba ngentwasahlobo okanye ihlobo lowama-2021.
I-90% yabathathi-nxaxheba baveze ukuba baya kuba besiya kuzonwabisa ngo-2021, ngelixa i-17.5% ibonakalise ukuba bayahamba ngezoshishino.
Ngenxa yobhubhane, ukuzithemba kwabathengi kutyelelo lwamazwe aphesheya kuhlala kusezantsi kuwo omabini ama-2020 kunye nama-2021.
I-64.5% yabathathi-nxaxheba abahamba ngo-2020 baceba ukuhamba apha ekhaya ngelixa i-22.1% yabo icwangcisa ukuhamba kumazwe aphesheya.
I-63.1% yabathathi-nxaxheba abahamba ngo-2021 baceba ukuhamba apha ekhaya ngelixa i-23.1% yabo icwangcisa ukuhamba kumazwe aphesheya.
Nangona kunjalo, i-53.9% yabakhenkethi base-US abachongiweyo bachaza ukuba baya kukhululeka ukuhamba kwilizwe lonke kwakhona kwiinyanga ezi-6 emva kokuba isitofu sikhona seCovid-19.
Olu phando luchonge amazwe kwaye luchaza ukuba uninzi lwabahambi baseMelika baceba ukuhamba ngo-2021:
Iindawo ezi-5 eziphezulu zokuya kumazwe ngamazwe ngo-2021 Iindawo ezi-5 eziPhambili eziya eMakhaya ngo-2021
ElamaTaliyane Inew york
Jemani North Carolina
Indawo yokuhlala kunye nezothutho
Ngexesha leholide elizayo, ama-53.3% abathathi-nxaxheba abachaze ukuba baya kuhamba ngo-2020 baceba ukuhlala ehotele kuhambo lwabo.
I-49.5% yabo babehamba ngo-2020 babonisa ukuba bazokuhlala kwirenti yeholide ngeeholide ezibhukishwe nge-AirBnB, Vrbo, okanye kwinkampani ezimeleyo yokurenta.
I-38.1% yabo baphenduliweyo ibonise ukuba bahlala nabahlobo kunye nosapho.
Ngelixa i-13.5% yabaphenduliyo ibonakalisile ukuba bazakuthatha uhambo olwandle ngeeholide ngelixa i-7.4% ithe bazakuhlala kwiRV.
Xa bebuzwa malunga nothutho abaceba ukuya nalo kwindawo abaya kuyo:
Ngama-65% abathathi-nxaxheba ababonisa ukuba bayakuthatha imoto kuhambo lwabo lwango-2020.
Iiplanethi ibizezesibini ezaziwa kakhulu kwezothutho phakathi kwabo bahamba kulo nyaka nge-56.7% yabaphenduli ababonisa ukuba baya kubhabha baye apho baya khona.
Abaphenduli abaseleyo babonisa ukuba baceba ukuthatha uloliwe (11.5%) okanye isikhephe (6.6%) ukuya kwindawo yabo elandelayo ngo-2020.
Imvakalelo yeinshurensi yokuhamba
Ubhubhane lube nefuthe elibonakalayo kwisigqibo sabathengi sokuthenga ukhuseleko kuhambo okanye i-inshurensi yokuhamba.
I-58.1% yabathathi-nxaxheba kuphando bathi banethuba lokuthenga i-inshurensi yokuhamba lonke uhambo oluya phambili kwaye i-32.8% yabo icwangcisa ukuthenga i-inshurensi yokuhamba kuhambo lwabo ngo-2021.
Xa uthatha isigqibo sokuba yeyiphi na inkampani enokuthenga i-inshurensi yokuhamba kwixabiso, ukulinganiswa kwe-Intanethi kunye nokuphononongwa kunye nokucwangciswa kokugubungela zizinto ezintathu eziphambili kubathengi abaqhelekileyo.
I-33.3% yabathathi-nxaxheba bacinga ngexabiso njengeyona nto ibaluleke kakhulu
I-19.4% yabo ithathela ingqalelo isicwangciso njengeyona nto ibalulekileyo
I-13.4% yabo ixabisa iireyithingi ezikwi-Intanethi kunye nokuphononongwa kakhulu.